Khuluma Nge-COPD - I-Global Allergy & Airways Patient Platform
I-COPD, noma isifo se-chronic obstructive pulmonary, isifo esiyingozi imbangela yesithathu enkulu yokufa, kodwa akekho okhuluma ngakho. Ngenxa yalokho, i-COPD inikezwa okubalulekile okuncane kakhulu. Ikona ingaphathwa ngendlela okufanele iphathwe ngayo, ngoba akukho mali eyanele enikelwe kuyo.
Mayelana nalo mkhankaso
Ngomkhankaso wethu oqanjwe igama KHULUMA NGE-COPD , sifuna ukwandisa ukuqwashisa futhi ukuqonda kwe-COPD phakathi kwabakhi bezinqubomgomo nezinhlelo zokunakekelwa kwezempilo.
Nge-2030, i Izindleko zomhlaba wonke ze-COPD zilinganiselwa ku-$4.8 trillion. Noma kunjalo, osopolitiki emhlabeni wonke abakayinaki kakhulu i-COPD. Ngaphezu kwalokho, ayisetshenziswa imali eyanele ukubhekana nenani labantu kanye nomthwalo womphakathi weCOPD.
Umhlaba awusakwazi ukuziba i-COPD. Sidinga abantu ukuthi babone umthelela we-COPD kubantu ngabanye nasemphakathini. Kumele senze isiqiniseko sokuthi abantu abaphila nalesi sifo bathola ukunakekelwa abakudingayo futhi okubafanele. Sidinga ukwesekwa kwakho UKUKHULUMA NGE-COPD.
Sidinga usizo lwakho!
Yenza izwi lakho lizwakale njengoba usekela i-SPEAK UP FOR COPD ukuze usize abantu abane-COPD bathole ukwelashwa okubafanele.
Sisize ukuthi sithole ukunakwa kwabakhi benqubomgomo nabaholi bezempilo ukuze senze i-COPD ibe yinto ehamba phambili yezempilo yomphakathi.
Njengabamele iziguli emhlabeni wonke, sifuna ukwenza iziguli, abanakekeli, ochwepheshe bezempilo, abenzi bezinqubomgomo kanye nomphakathi bazi ngomthelela we-COPD. Ngaphezu kwalokho, sifuna ukukhombisa indlela ukunakekelwa kwesiguli okungathuthuka ngayo. Sikholelwa ukuthi iziguli kufanele zikwazi ukuphila ngokukhululeka ne-COPD, ngaphandle kwezimpawu nokuqubuka. Ngaphezu kwalokho, iziguli ezine-COPD kufanele zikwazi ukuphila isikhathi eside ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuya ezibhedlela ngaso sonke isikhathi.
Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-11-18T15:06:22+01:00November 17, 2021|Blog|Amazwana Off ku-Speak Up For COPD